Turkiga oo joojiyey baadi-goobkii Meydka suxufi Jamal Khashoggi • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Turkiga oo joojiyey baadi-goobkii Meydka suxufi Jamal Khashoggi
Turkiga oo joojiyey baadi-goobkii Meydka suxufi Jamal Khashoggi
Booliiska Turkiga ayaa sheegay inay soo gaba-gabeeyeen baadi-goobkii ay ugu jireen inay helaan meydka suxufi Jamal Khashoggi oo bishii hore lagu dhex dilay Qunsuliyada Sacuudiga ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Suxufiga Khashoggi ayaa la rumeysan yahay in kooxda dishay ee Sirdoonka Sacuudiga ay meydkiisa jar-jareen isla markaana ku gubeen sunta aashitada, waxaana muddo dheer baaritaan lagu waday xafiiska Qunsuliyada iyo Guriga Qunsulka Sacuudiga ka degenaa magaalada Istanbul.
Dowlada Sacuudiga ayaa iyadu sheegtay inaysan ogeyn meesha uu meydka ku danbeeyey iyadoo horeyna u sheegtay inay meydkaasi u dhiibtay mid kamid ah dad kala shaqeeya Turkiga, hase yeeshee illaa iyo hada ma sheegin qofkaasi meydka loo dhiibay.
Booliiska Turkiga ayaa rumeysan in meydka aan cidna loo dhiibin balse ay isla kooxda Sacuudiga ee dilka geysatay ay burburiyeen dhamaan wixii raad ahaa oo ay kamid yihiin xubnihii jirka ee la jarjaray.
Diblumaasiyiinta Sacuudiga ayaa marar badan is hortaagay in la baaro ceel-biyood ku dhex yaal guriga Qunsulka Sacuudiga ee Istanbul, ceelkaasi oo horey looga shaki qabay in lagu qariyey meydka, nawaaxiga goobtaasi oo laga helay haraadiga sunta iyo aashitada la rumeysan yahay in loo adeegsaday in lagu gubo meydka suxufi Khashoggi.